Isinyibilikisi / abaPhakathi abavelisi kunye nabaxhasi - iChina izinyibilikisi / abaXhasi baseFektri
I-N-Octyl-2-Pyrrolidone yindawo ye-heterocyclic ephilayo kunye ne-arhente yokumanzisa ngokukhawuleza
ukuhlamba izitya, imizi-mveliso kunye nokucoca amaziko. Inokusebenza njengesinyibilikisi seepolymers kunye nezinto ze-hydrophobic kwaye isebenzise njengomphathi wedayi kwilaphu le-aramid. Ezona zibonelelo ziphambili ze-N-Octyl-2-Pyrrolidone sisisombululo sayo esiphakamileyo seemolekyuli ze-hydrophobic.
I-N-Octyl-2-Pyrrolidone iyodwa ikwindawo yokusombulula indawo esebenzayo kwaye inokwenziwa njengesixhobo sokunyibilikisa ngaphakathi.Le propati iluncedo kwimixube emininzi.
iikhemikhali zeshishini, imveliso yokuqala yokwenziwa kweekhemikhali kunye nokunyibilikiswa.
I-N-Dodecyl-2-Pyrrolidone sisixhobo esiphantsi esinamagwebu, esingasebenziyo esisebenza ngaphakathi kumzi mveliso, abacoci bemizi-mveliso kunye namaziko. Le khemikhali ikwayi-arhente yokumanzisa esetyenziselwa ukunamathela kunye nokutywina kwemichiza. I-N-Dodecyl-2-Pyrrolidone inxibelelana nabasebenzi be-anionic, besenza ii-micelles ezixubeneyo, ezikhokelela kunciphiso lomdibaniso womphezulu wokuhlangana kunye nokuphuculwa kokumanzi. I-N-Dodecyl-2-Pyrrolidone isetyenziswa kwishishini lokubulala izitshabalalisi. Kukwaziwa ukuba isetyenziswe njenge-conditioner, i-foam stabilizer, ii-inks, kunye neengubo ezithwala amanzi.
I-N-Ethyl-2-Pyrrolidone ayinambala kwaye inombala otyheli omthubi kunye nevumba le-amine etyhafileyo, njenge-aprotic kunye ne-polar solvent solvent echanekileyo ngamanzi. Iiparamitha zoBugcisa eziPhambili: Inkangeleko engenambala kwiLwelo elityheli elincinci Purity 99.5% min. Amanzi ayi-0.1% ubuninzi. g-I-Butyrolactone 0.1% ubuninzi. Amines 0.1% ubuninzi. Umbala (APHA) ama-50 max. Izicelo: Zisetyenziswa njengabaPhakathi ukuhlanganiswa kwe-agrochemicals, amayeza, abancedisi bempahla, iiplastiki, iipolymer ...
I-N-Methyl-2-Pyrrolidone yinkomfa ye-organic equka i-5-membran lactam. Lulwelo olungenambala, nangona iisampulu ezingcolileyo zinokubonakala zimthubi. I-miscible ngamanzi kunye nezinyibilikisi eziqhelekileyo zezinto eziphilayo. Ikwaludidi lweedipolar aprotic solvents ezinje nge dimethylformamide kunye ne dimethyl sulfoxide. Isetyenziswa kwimizi-mveliso ye-petrochemical kunye neplastics njengesinyibilikisi, sisebenzisa ukunganyaniseki kwayo kunye nokukwazi ukunyibilikisa izinto ezahlukeneyo Iiparameter zobuchwephesha eziphambili: iAppea ...